Home Wararka Ciidamo kawada tirsan ciidanka dowlada oo xalay ku dagaalay magaalada Jowhar
Ciidamo kawada tirsan ciidanka dowlada oo xalay ku dagaalay magaalada Jowhar
Sida ay sheegayaan wararka ka imaaanaya magalaada waxa xalay dagaal fool-ka-fool ah uu hdex maray jowhar ciidamo kawada tirsan dowladda dagaalkaas ayaa waxa ka dhashay khasaaro kala duwan. Dagaalka ayaa ahaa mid la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan yaa yimid, kadib markii ay isku dhaceen ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad iyo kuwa Booliska ee magaaladaasi, waxaana dhex-maray is rasaaseyn khasaare dhalisay oo muddo ka socotay magaalada.
Dagaalka ayaa ka dhashay xabado loo ridaayay dabaaldega xuska 26k June. Goobjoogayaal ayaa sheegay labo askari oo ka kala tirsanaa labada dhinac ay ku dhinteen dagaalkaasi, waxaana jira dhaawac kale oo ka dhashay iska hor imaadkaasi. Is-rasaaseynta ayaa dhacday, xilli loo dabaal-degayey xuska munaasadda 26-ka June, iyada oo cabsi soo wajahday dadkii ka qeyb-galayey xafladda dabaal-degga.
Sidoo kale ma cadda illaa iyo hadda sababta rasmiga ah ee dhalisay dagaalka dhex-maray labada dhinac, mana jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha amniga. Xaaladda ayaa maanta degan, waxaana si caadi ah kusoo laabtay dhaq-dhaqaaqa goobihii lagu diriray ee magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelah Dhexe.